13-ka Jaamacadood ee ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah 2022
13ka Jaamacadood ee ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah
Boostada balooggani waxay ku siinaysaa macluumaad la taaban karo oo ku saabsan jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Dugsiyadan ayaa lagu qiimeeyay kuwa ugu fiican iyadoo la eegayo goobaha iyo wakaaladaha. Waxaa looga hadlay maqaalkan si ay kuugu hanuuniyaan qaadashada go'aamo sahlaya gelitaankaaga daraasaadka sharciga caalamiga ah.
Daraasadaha sharciga ayaa ka dhex jiray bini'aadamka weligeed, laga yaabee inaysan ahayn daraasadaha se, laakiin arrimaha sharciga ayaa la isticmaalayey tan iyo bilowgii. Waxa loo adeegsadaa in lagu ilaaliyo nafta, hantida, iyo in loo xukumo cidda ama waxa ay khusayso.
Hagaag, kani waa adeegsigeeda aasaasiga ah oo waxay lahayd, sannado badan, kacday oo lagu dabaqay qaybo badan laakiin kama aanay leexan kiiskeedii hore ee isticmaalka. Maanta, waxaa jira sharciga ganacsiga, sharciga daryeelka caafimaadka, sharciga caalamiga ah, sharciga xayawaanka, sharciga dembiyada, sharciga canshuurta, sharciga deegaanka, iyo kuwa kale.
Sharciga caalamiga ah waa laan ka mid ah sharciga iyo barnaamij xiiso leh oo ka mid ah ardayda. Hadii aad waligaa dareentay inaad sii wadato shahaado sharciga caalamiga ah, qoraalkan si fiican baa loo faahfaahiyay si uu kaaga caawiyo dhamaan macluumaadka aad u baahan karto.
Dugsiyo badan ayaa bixiya barnaamijyo sharciga caalamiga ah laakiin qaar yar oo iyaga ka mid ah ayaa lagu qiimeeyay inay yihiin kuwa ugu fiican bixinta barnaamijkan. Anagu nafteena maanu samaynin qiimayntan balse waxa sameeyay goobo caalami ah oo la aqoonsan yahay kuwaas oo si qoto dheer u maray cilmi baadhis iyo falanqayn si ay jaamacado u kala sareeyaan barnaamij, goob, iwm.
Waxaa jira arrimo badan oo loo isticmaalo in lagu qiimeeyo barnaamijka jaamacadda ama jaamacadda lafteeda sida ugu fiican ama ka mid ah kuwa ugu fiican. Goobaha caanka ah ee kuwan sameeya waa Times Higher Education (THE), US News & World Report, QS World University Rankings, iyo Shanghai Ranking.
Haddaba, jaamacadaha ugu wanaagsan shuruucda caalamiga ah ayaa lagu qiimeeyay jaangooyooyinkan waxaanan u doorannay inay ku siiyaan macluumaad dheeri ah oo fududayn kara gelitaanka jaamacadahan.
1 Waa maxay sharciga caalamiga ah
2 Sida Loo Helo Jaamacadaha Ugu Wanaagsan Sharciga Caalamiga ah
3 Shuruudaha lagu baranayo sharciga caalamiga ah ee dibadda
4 Jaamacadaha ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah
4.1 1. Jaamacadda Oxford
4.2 2. Yale University
4.3 3. Jaamacadda Georgetown
4.4 4. Jaamacadda Groningen
4.5 5. Jaamacadda Cambridge
4.6 6. Harvard University
4.7 7. Jaamacadda New York (NYU)
4.8 8. Columbia University
4.9 9. Jaamacadda California, Berkeley
4.10 10. Jaamacadda Tilburg
4.11 11. Jaamacadda Nottingham
4.12 12. Stanford University
4.13 13. Jaamacadda Glasgow
Waa maxay sharciga caalamiga ah
Sharciga caalamiga ah waa jaangooyooyinka iyo halbeegyada guud ahaan loo aqoonsan yahay inay ku xiran yihiin waddammada si loo sugo amniga iyo nabadda quruumaha kala duwan. Waxa kale oo loo yaqaan sharciga caalamiga ah ee dadweynaha iyo qaanuunka qaramada waxayna u taagan tahay ilaalinta nidaamka iyo nabadda adduunka.
Hadda markaad barato sharciga caalamiga ah, waxaad baran doontaa oo aad ku dhaqmi doontaa xeerarka, heshiisyada, iyo axdiyada dalalka xidhidha.
Sida Loo Helo Jaamacadaha Ugu Wanaagsan Sharciga Caalamiga ah
Helitaanka jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah waa sahlan tahay markaad gacantaada ku haysato internetka. Waxaad si sahlan u isticmaali kartaa mid ka mid ah matoorada raadinta sida Google si aad cilmi baaris ugu sameyso jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad kala hadli kartaa macalimiintaada kuliyada ama macalinka dugsiga sare waxaad xiiseyneyso inaad barato sharciga caalamiga ah. Waxay kaa caawin karaan inay kugula taliyaan jaamacadaha ugu fiican ee la codsado si loo sii wado barnaamijka oo ay kuu qoraan warqad talobixin wanaagsan.
Shuruudaha lagu baranayo sharciga caalamiga ah ee dibadda
Kuwa soo socda ayaa ah shuruudaha guud ee lagu baranayo sharciga caalamiga ah;
Ardayda codsanaysa sida kuwa ka qalin jabiyay dugsiga sare waa inay lahaadaan ugu yaraan saddex shahadooyin oo heer A ah oo xooggan.
Kuwa doonaya in ay bartaan sharciga caalamiga ah ee heerka postgraduate waa in ay dhammeeyeen shahaadada koowaad ee jaamacadda ama sannadihii ugu dambeeyay ee ay dhammeeyeen shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Dhammaan codsadayaasha, ha ahaadeen kuwa shahaadada koowaad leh ama kuwa qalinjabiyey, waa inay lahaadaan shahaadooyin adag.
Mawduucyada sida sharciga, dhaqaalaha, Ingiriisiga, iyo taariikhda ayaa looga baahan karaa inay yihiin maadooyin horay looga baahnaa in la qaato ka hor inta aan la codsan. Sidoo kale, qaadashada maadooyinkan waxay xoojin kartaa codsigaaga.
Codsadayaasha ka yimid wadamada ajnabiga ah ee aan afkooda hooyo ahayn Ingiriisi waxa looga baahan doonaa inay qaataan imtixaanka aqoonta luqadda Ingiriisiga. Taasi waa haddii aad u socoto waddan kale si aad u barato sharciga caalamiga ah
Dhammaan codsadayaashu waa inay soo gudbiyaan qoraallada akadeemiyadeed ee dugsiyadii hore ee ay dhiganayeen.
Jaamacado kala duwan oo dalal kala duwan ku yaal waxay ku siin karaan imtixaan gudaha ah, waraysi, ama labadaba si ay kuu qiimeeyaan. Markaa taas u diyaar garow
Buuxi foomka oo bixi kharashka codsiga, haddii loo baahdo.
Hayso dukumeentiyada sida CV ama resume, ID, caymiska caafimaadka, iwm sida loo baahdo.
Waraaqaha tixraaca, qoraallada, iyo bayaannada shakhsi ahaaneed waa inay sidoo kale ku jiraan faylalkaaga haddii loo baahdo.
Kuwani waa shuruudaha caadiga ah si loo codsado barnaamijka shahaadada koowaad ama qalin-jabinta ee jaamacad kasta oo adduunka ah. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in ay jiri karaan wax ka badan ama ka yar shuruudahan halkan ku qoran. Sidaa darteed, waa inaad booqataa bogga gaarka ah ee jaamacadda aad xiisaynayso oo aad ka raadiso shuruudaha gaarka ah ama la xidhiidh xafiiska gelitaanka oo aad hesho faahfaahin dheeraad ah.
Maqaalkan, kaliya kuma aynaan taxnayn oo ka hadalnay jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah, laakiin waxaan sii wadnay inaan sheegno shuruudo la taaban karo oo mid kasta oo ka mid ah iskuulada ah, waxaana sidoo kale siinay isku xirka shabakadahooda halkaas oo aad si fudud ugu tagi karto ilo badan si aad wax badan uga ogaato. xog.
Anagoon waxba ka dheerayn, aan galno jaamacadahan.
Jaamacadaha ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah
Kuwa soo socda waa jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah:
Jaamacadda New York (NYU)
1. Jaamacadda Oxford
Jaamacadda Oxford waa machad sare oo sharaf leh oo caalami ahaan laga aqoonsan yahay England. Waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Boqortooyada Ingiriiska iyo adduunka qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadeeda ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka. Jaamacadu waxay caan ku tahay inay bixiso barnaamijyo shahaado tayo leh oo kala duwan oo barnaamijyo hal abuur leh oo u horseedaya bachelor, master's, doctorate, iyo shahaadooyin kale oo wadajir ah.
Iyada oo loo marayo kuliyadeeda sharciga, Jaamacadda Oxford waxay bixisaa barnaamijyo sharci dhinacyo kala duwan sida sharciga caalamiga ah, sharciga xuquuqda aadanaha, sharciga deegaanka, iyo falsafada sharciga ah. Hadda, jaamacaddan ayaa lagu qiimeeyay mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan sharciga caalamiga ah iyadoo ay ugu wacan tahay waxbaridda tacliinta heerka caalami iyo wax ku oolka ay siiso ardayda goobta ku jirta.
Barnaamijkeeda sharciga caalamiga ah waxaa lagu qaadan karaa heerka shahaadada koowaad ee u horseedaya BA ama heerka qalin-jabinta taasoo horseedda MSc. Waxa jira dhawr ikhtiyaar oo sharci caalami ah oo laga heli karo Bachelor of Law Madaniga (BCL) iyo Magister Juris (MJur). Kulliyada sharciga waxay sidoo kale iskaashi la sameeyaan waaxyo kale si ay u bixiyaan barnaamijyo waqti-dhiman ah, shahaadooyin, dibloomayo postgraduate, iyo Master of Studies (MST) ee qaybaha kala duwan ee sharciga caalamiga ah.
Jaamacadda Yale waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah, xubin ka ah ururka caanka ah ee Ivy League, iyo mid ka mid ah machadyada tacliinta sare ee ugu wanaagsan adduunka. Waxaa laga yaabaa inaad hadda ogeyd sida ay tartan ugu jirto gelitaanka Yale, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad leedahay heer sare, shahaado tartan si aad u codsato sharciga caalamiga ah.
Dugsiga Yale Law wuxuu mas'uul ka yahay bixinta barnaamijyo tacliimeed oo ku saabsan qaybaha sharciga oo ay ku jiraan sharciga caalamiga ah. Iyada oo loo marayo deeqaha manhajka iyo manhajka ka baxsan, ardaydu waxay la kulmaan mawduucyo kala duwan oo aan caadi ahayn, iyo fursado waxbarasho oo khibrad leh oo ay ku bartaan oo ay uga qaybgalaan sharciga caalamiga ah.
Yale wuxuu bixiyaa barnaamijyo shahaado caalami ah oo u horseedaya Juris Doctor (JD), Master of Laws (LL.M), Ph.D., iyo JD-MBA wadajir ah.
3. Jaamacadda Georgetown
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah oo ku yaal Georgetown, Washington, DC, Mareykanka. Jaamacaddu waxa ay ka kooban tahay toban dugsi oo isugu jira kuwa heer jaamacadeed ah iyo kuwo ka qalin jabiyay iyada oo uu ka mid yahay kulliyadda sharciga. Dugsiga Sharciga, oo badanaa loo yaqaan Sharciga Georgetown, waa kuliyad maamusha barnaamijyo sharci oo kala duwan oo uu ku jiro barnaamijka sharciga caalamiga ah.
Barnaamijka sharciga caalamiga ah ee Sharciga Georgetown wuxuu u horseedaa JD iyo LL.M wuxuuna soo jiitaa ardayda caalamiga ah barnaamijyadan.
4. Jaamacadda Groningen
Tani waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo Nederland ku taal oo bixisa barnaamij LLB ah oo sharaf leh oo ku saabsan sharciga caalamiga iyo kan Yurub. Waa barnaamij heer jaamacadeed ah oo qaata 36 bilood in la dhammaystiro (waqti buuxa oo keliya), waxaa lagu bartaa Ingiriisi, ardayda ajnabiga ahna waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay ardayda ujeeddadoodu tahay inay ku sii wataan xirfad xirfadeed deegaan sharci oo caalami ah. Codsadayaasha caalamiga ah waxaa loo xilsaaray inay qaataan imtixaanka aqoonta luqadda Ingiriisiga. Kharashka waxbarashada ee ardayda Nederland iyo gobollada kale ee EU/EEA waa €1,084 sannadkii iyo €8,916 sannadkii ardayda aan EU/EEA ahayn.
5. Jaamacadda Cambridge
Jaamacadda Cambridge weli waa machad kale oo sharaf leh oo caalami ahaan loo aqoonsan yahay bixinta waxbarasho heer caalami ah iyo guulaheeda iyo wax ku biirinta qaybaha kala duwan. Waxay ku taal Cambridge, Boqortooyada Ingiriiska, waana mid ka mid ah machadyada ugu da'da weyn ee ka shaqeeya tacliinta sare.
Jaamacadda Cambridge waxay leedahay kulliyada sharciga oo bixisa barnaamijyo tacliin oo ballaaran oo dhanka sharciga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku sii wadi kartaa oo keliya barnaamijka sharciga caalamiga ah heerka postgraduate. Kulliyaddu waxay bixisaa Diploma hal sano ah oo sharciga caalamiga ah taasoo la qaadan karo waqti-dhiman oo la baari karo iyadoo lagu salaynayo cilmi-baaris la kormeero.
6. Jaamacadda Harvard
Jaamacadda Harvard runtii waa caan, mid ka mid ah Ivy Leagues', iyo dugsiga riyada ee arday badan oo ka qalin jabiyay dugsiga sare iyo kuwa ka qalin jabiyay bachelor. Dugsigeeda sharciga, Harvard Law School, waa mid ka mid ah dugsiyada sharciga ugu sarreeya adduunka oo bixiya barnaamijyo sharci oo kala duwan oo ay ku jiraan JD, saddex nooc oo barnaamijyo laba shahaado ah, iyo Ph.D. dhamaantood qaanuunka caalamiga ah iyo isbarbardhigga.
Harvard waa jaamacad caan ku ah aduunka oo dhan guulo waxbarasho iyo wax ku biirinta dhinacyada sayniska, farshaxanka, ganacsiga, iwm. Waa dugsi aad u adag in la galo. Marka laga reebo in aad loo tartamayo, heerka aqbalku waxa uu ka mid yahay kuwa ugu hooseeya adduunka. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad lahaato mawqif tacliimeed oo wanaagsan, qor qormo heersare ah iyo bayaan ujeedo, oo goor hore u soo dir codsigaga.
7. Jaamacadda New York (NYU)
Dugsiga Sharciga ee NYU waa dugsiga sharciga ee Jaamacadda New York wuxuuna ka mid yahay jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Dugsiga waxaa loogu talagalay in uu u diyaariyo ardayda si ay ugu guulaystaan ​​nooc kasta oo shaqo mustaqbalka ah si degdeg ah isu beddela, qoto dheer oo xidhiidhsan, iyo adduun had iyo jeer muran badan.
Si loo daboolo noocyada sharciga caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah, kulliyaddu waxay bixisaa in ka badan 50 koorsooyin, siminaaro, rugaha caafimaadka, iyo tababaro kale oo gacan-ku-qaad ah sannadkii. Barnaamijka sharciga caalamiga ah iyo kan caalamiga ah wuxuu horseedaa JD, LL.M, iyo Ph.D. Waxa kale oo jira ku biirista LLM/JSD iyo barnaamijyada fulinta ee sharciga caalamiga ah ee ay bixiso kulliyadu.
8. Jaamacadda Columbia
Jaamacadda Columbia waxay ku taal New York waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Kulliyadeeda sharciga, Columbia Law School, waxay bixisaa barnaamijyo badan oo kala duwan oo dhanka sharciga caalamiga ah iyo sidoo kale JD oo diiradda saaraya Sharciga Ganacsiga Caalamiga ah kaas oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican.
Iyada oo loo marayo Barnaamijka Sharciga Caalamiga ah iyo Isbarbardhigga ee Dugsiga Sharciga Columbia, waxaad iska qori kartaa barnaamijyo laba-shahaadad ah oo leh jaamacado ku yaal Yurub, 15 barnaamijyo dibadda ah oo ku yaal 11 waddan, iyo bixinta koorsada edbinta dhex-dhexaadinta iyada oo loo marayo Dugsiga Caalamiga ah ee Columbia iyo Arrimaha Dadweynaha.
Intaa waxaa dheer, ardaydu waxay sidoo kale heli karaan dhowr xarumood oo cilmi baaris ah oo la xiriira goobtooda si ay u xoojiyaan xirfadahooda iyo aqoonta arrimaha sharciga caalamiga ah.
9. Jaamacadda California, Berkeley
UC Berkeley waa machad sare oo sharaf leh oo ku taal Berkeley California oo caan ku ah cilmi baaris degdeg ah iyo barnaamijyadeeda cusub. Waxaa lagu qiimeeyay THE, US News & World Report, iyo QS World University Ranking ka mid ah jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Iyadoo loo marayo waaxdeeda, Sharciga Berkeley, jaamacaddu waxay bixisaa barnaamijyo shahaado tacliimeed oo ku saabsan Sharciga Caalamiga ah iyo Isbarbardhigga.
Dugsiga sharciga wuxuu bixiyaa barnaamijyo ku saabsan sharciga caalamiga ah iyo isbarbardhigga ee u horseedaya JD, LL.M, iyo Ph.D. shahaadooyinka. Waxbarashada fulinta ee hogaamiyayaasha ururada iyo xirfadlayaasha sharciga ayaa sidoo kale la bixiyaa. Koorasyadu waa kuwo isku dhafan waxaana laga heli karaa qaybaha kale ee jaamacadda.
Dugsigu waxa kale oo uu bixiyaa shahaado takhasuska sharciga caalamiga ah oo ardaydu dhamaystiri karaan iyada oo qayb ka ah barnaamijka JD ama LL.M. Ugu dambeyntii, ardaydu waxay heli karaan agab iyo tas-hiilaad aad u wanaagsan oo siin kara waxbarasho khibrad leh.
10. Jaamacadda Tilburg
Jaamacadda Tilburg waa jaamacad caan ah oo tacliinta sare ah oo ku taal Nederlaan waxayna ku jirtaa liiska jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Jaamacaddu waxay bixisaa hal sano oo Sharciga Caalamiga ah iyo barnaamijka Maamulka Caalamiga ah oo bixiya LL.M. Barnaamijka waxa lagu dhigaa luqadda Ingiriisiga.
Manhajka barnaamijkan LLM waxa uu daboolayaa saddex qaybood oo sharciga caalamiga ah: Sharciga Caalamiga ah iyo Xiriirka Caalamiga ah, Xuquuqul Insaanka iyo Amniga Aadanaha, iyo Joogitaanka Caalamiga ah iyo Sharciga Deegaanka. Ardeyda waxaa lagu soo dhaweynayaa in ay takhasuskooda ku waafajiyaan baahidooda shaqo.
11. Jaamacadda Nottingham
Jaamacadda Nottingham waa jaamacad guud oo ku taal England waxayna ku bixisaa LLM sharciga caalamiga ah. Barnaamijku waxa uu leeyahay doorashooyin wakhti buuxa ah iyo kuwo dhiman kuwaas oo lagu dhammeeyo 12 bilood iyo 24 bilood siday u kala horreeyaan. Barnaamijku waxa kale oo uu leeyahay qaybo badan oo kala duwan oo aad dooran karto inaad diirada saarto sida sharciga Yurub, sharciga ganacsiga caalamiga ah, sharciga xuquuqul insaanka iyo sharciga caalamiga ah ee guud, iyo cadaalada dembiyada.
Sidaa darteed, waxaad u qaabayn kartaa LLM-gaaga sharciga caalamiga ah danahaaga iyo ujeedooyinka shaqo. Kharashka ardayda UK waa £11,050 iyo £21,000 ardayda caalamiga ah sanadkii.
Stanford waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan bixinta waxbarasho tacliineed oo tayo leh waxaana soo baxday in barnaamijkeeda caalamiga ah iyo kan caalamiga ah uu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan. Barnaamijka waxaa bixiya Stanford Law School wuxuuna ardayda u diyaariyaa inay ka soo dhalaalaan caqabadaha deeqaha-waxbarasho ee heerka caalamiga ah iyo horumarka dhabta ah ee aduunka.
Ardayda waxaa sidoo kale loo maro safarka khibrada waxbarasho si kor loogu qaado xirfadahooda arrimaha sharciga caalamiga ah. Waxa kale oo jira fursado kale sida barnaamijka sarifka lacagaha qalaad si ay kuugu oggolaadaan inaad naftaada ku dhex milmi karto aduunka, dhisto xirfado wada shaqayn, iyo ku tababarto heer caalami ah.
13. Jaamacadda Glasgow
Jaamacadda Glasgow waa jaamacad caan ah oo ku taal Scotland waxayna ugu dambeyntii ku jirtaa liiska jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah. Sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Glasgow waxaa lagu bartaa heerka jaamacadeed oo u horseedaya shahaadada LLM. Waa barnaamij ku habboon ardayda raba inay kordhiyaan aragtidooda si ay u gaaraan goob caalami ah oo ay eegaan wax ka baxsan nidaamka sharciga gudaha.
Waxaad qaadan kartaa barnaamijka waqti buuxa ama waqti dhiman kaas oo lagu dhammeeyo 12 bilood iyo 24 bilood siday u kala horreeyaan. Ardayda UK ee ku diiwaangashan doorashada wakhti-dhiman, khidmaddu waa £1,112 20kii buundo iyo kuwa wakhtiga buuxa ah, khidmadu waa £10,000. Waxbarashada ardayga caalamiga ah waa £21,650 oo keliya dookh waxbarasho oo waqti-buuxa ah.
Kuwani waa 13-ka jaamacadood ee ugu wanaagsan sharciga caalamiga ah waana machad aad u tartan badan si ay u galaan qiime aad u hooseeya. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad yeelato waxqabad tacliimeed heer sare ah si lagugu aqbalo mid ka mid ah shahaado sharciga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, haddii aad leedahay shahaado heer sare ah waxaa lagu meelayn karaa deeq waxbarasho oo dabooli karta waxbarashadaada inta lagu jiro waxbarashadaada oo dhan.
Sharciga caalamiga ah ma ku fiican yahay in la barto?
Barashada sharciga caalamiga ah waa mid wanaagsan maadaama ay u ogolaato ardayda inay horumariyaan fikradaha nidaamka sharciga caalamiga ah iyo saamaynta ay ku leedahay siyaasadaha caalamiga ah iyo kuwa qaranka labadaba.
Halkee baan ka bartaa sharciga caalamiga ah?
Waxaad ku baran kartaa sharciga caalamiga ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican sharciga caalamiga ah ee lagu qeexay oo looga hadlay qodobkan.
Wadankee ugu fiican sharciga caalamiga ah?
Wadamada ugu fiican ee lagu barto sharciga caalamiga ah waa Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Australia, iyo Singapore.
Maxaan u qaataa sharciga caalamiga ah?
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku guulaysato Bachelor of Arts (BA) ee Cilmi-baarista Caalamiga ah ama BA ee Xiriirka Caalamiga ah.
Qareennada caalamiga ah ma dalbanayaan?
Maaddaama sharciga caalamiga ah iyo qareennada caalamiga ahi ay ku xidhan yihiin caalamiyaynta, tani waxay ka dhigaysaa inay dalbadaan.
Waa maxay noocyada qareennada caalamiga ah ee jira?
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo qareenno caalami ah, oo ay ku jiraan qareennada ganacsiga, qareennada dawladda ku salaysan, iyo xirfadlayaal gaar ah oo ku takhasusay xuquuqda aadanaha iyo sharciyada socdaalka.
Qareennada caalamiga ahi lacag fiican ma sameeyaan?
Qareenada caalamiga ahi waxay sameeyaan lacag fiican oo ay qaataan mushahar u dhexeeya $110,000 ilaa $131,000 sanadkii.
10 Jaamacadood ee ugu Fiican New York ee Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha ugu Fiican Dhaqaalaha Hindiya
Barashada Hagaha Dibadda Barashada Australia Barashada Kanada | Gelitaan | Deeqaha waxbarasho | Khidmadaha | Deeqo iyo Deymo
Previous Post:11 jaamacadood oo jaban oo ku yaal Faransiiska oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah
Post Next:8 Jaamacadaha ugu jaban Nederlaan